DC kadhi Jizile (Jizairu) [wokurarama zvikwereti chete]
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ DC kadhi Jizile (Jizairu) [wokurarama zvikwereti chete]
wechikoro twasu-mutsetse nzira. Mukushandisa, rechi15 dzose mwedzi sezvo mukuvhara musi, Zvinokosha kudzorera unotevera mwedzi mazuva 10. Chekutanga mutsividzo Pane chinhu kuti kufarira akasununguka. Somuenzaniso, kana iwe kunotenga 30,000 Yen muna February, sezvazviri 5000 Yen kubva mutsividzo uwandu musi March 10, ndiro chemhosva musi kokutanga, Rakakwanira wechikoro, nengaidzo pashure muripo chinoitwa kuti 25,000 Yen iwe.
anotora inotevera April 51 Yen kubva pamazuva 10 kufarira, May ndiye 308 Yen, muna June kubhadhara chitsama kuti rakawedzerwa 5000 Yen vafarire 235 Yen. Kwokupedzisira mutsividzo musi September 10, iwe uchava kubhadhara 53 Yen mhindu. Prepayment vanogamuchirwa chero nguva. Kana iwe kubhadhara 10,000 Yen kuti chemhosva musi kutangira muna muenzaniso uyu, pachiyero achava 20,000 Yen iri dzinounzwa kuna wechikoro zvakananga. In
kufarira kune March inotevera 10 akasununguka, 5000 Yen ari kutorwa kuti wechikoro, pachiyero achava 15,000 Yen. It inogona kuwedzerwa chero nguva mutsividzo, kana chemhosva mangwanani, unogona kucheka kuti chitsama mubereko. mamiriyoni 1 Yen kubva
DC kadhi Jizile ndiye wokurarama zvikwereti chete kadhi iri Mitsubishi UFJ boka rakapa. Annual muripo riri for free, wasununguka mubhadharo mhando kadhi. Rendi zvino ndinoiitawo kufarira shoma pamari yezvikwereti iri kubhadharwa kuti 5000 Yen, mamwe mutsividzo zvava zvichibvira chero nguva apo pane pachisara.
achange rwoga kuisa kusvika 5,000 Yen panguva kubvuma, asi zvinogona kuisa pa 10,000 Yen kubva 10,000 Yen ari Web mabasa uye runhare 50,000 Yen pashure rubvumo. Application kwava nemakore 18 kana vakura, asi vokusekondari, nevana vanogona kubatana pamusoro vabereki kubvumirana. kadhi Family, zvakadai somunhu wako kana vana vapenyu mune imwe vanopiwawo rakapa, riri gore negore nhengo kubhadhara akasununguka. Meri huru
DC kadhi Jizile Tsu musuo iri panguva nguva yakawedzerwa kumusoro. Normal rokubhengi, asi imwe pfungwa iri unoenderana 4 Yen kusvika 5 Yen vanoshandisa 1000 Yen ndiyo vazhinji, ane-pfungwa nhatu paminiti 1000 Yen anowanika DC kadhi Jizile, nekuti imwe nguva kwakafanana anenge 5 Yen, pfungwa rutapudzo zvazvingava achava 1.5 muzana.
Ndicho soro pamwero iri indasitiri, ndiko kukwezvana guru. Pfungwa vakawana ari kadhi, inogona kutsiviwa aine 18-pfungwa pabasa Kudyidzana, zvakadai mambure makiromita kana JAL makiromita, unogona kushandisa zvakawanda.
pane mhiri kwemakungwa mabasa inishuwarenzi pakufamba tsaona sezvo ancillary mabasa, zvichava ndanyarara hangu kuti vaifanira mamiriyoni 10 Yen kuti kukuvara munguva rwendo. DC kukuvadza kuripa kwemazuva 90 kubva kutenga nhumbi yakatengwa pamusoro kadhi Jizile, kudzikamisa kusvikira gore muganhu mamiriyoni 1 Yen. Caching mabasa uyewo zvacho 100,000 Yen.
wokurarama chikwereti kuna munhu akadaro ndiye akakodzera kuti kadhi yokutanga nguva vanhu vari aizengurira pakuti hauna kubhadhara mubereko. Nokuti yepachena muripo mhando, chero nguva inogona kubhadharwa kubva ATM, unogona nyore kucheka mhindu. Tinotarisira akawanda makadhi kuunganidza pfungwa dziri kadhi muripo. Large Pane purogiramu kunotenga, ndiwo kadhi kuti zvakadaro kunogona akakurudzira vanhu vanonzi nani kuti ataure kana ukashandisa kadhi yave akaunganidza. Zvichava 5%.
wokurarama chikwereti kuna munhu akadaro ndiye akakodzera kuti kadhi yokutanga nguva vanhu vari aizengurira pakuti hauna kubhadhara mubereko. Nokuti yepachena muripo mhando, chero nguva inogona kubhadharwa kubva ATM, unogona nyore kucheka mhindu. Tinotarisira akawanda makadhi kuunganidza pfungwa dziri kadhi muripo. Large Pane purogiramu kunotenga, ndiwo kadhi kuti zvakadaro kunogona akakurudzira vanhu vanonzi nani kuti ataure kana ukashandisa kadhi yave akaunganidza.